Sir ku socota Gabdhaha, ” Dareenka Ragga tinta ku leh Xabadka Iyo Lugaha” | War Helaa Talo Hela	Saturday, May 18th, 2013	Home
Sir ku socota Gabdhaha, ” Dareenka Ragga tinta ku leh Xabadka Iyo Lugaha”
ShareDareenka isku taga ayaa ah mid ku yimaado siyaabo kala gadisan ayadoona labada dhinac ee wax uu ka dhaxeeyo ay yihin kuwa ku kala gadisan hadba midka kale sida uu wax u rabo waxaana ka mid ah in dareenka lagu raadiyo sida ugu haboon ee lagu xalin karo xasrada kacsi ee xiliyada gaar taagan.
Sirta laga helay raga timaha ku leh salka ( Futada ) ayaa ah mid inta badan ay dareensanyihin raga gaar ahaan ayadoona la ogaaday in ay yihin kuwa ugu kacsiga badan dhanka kale ugu dareenka dhow marka laga hadlayo dhanka biya baxa.
Ragga tinta ku leh salka ayaa lagu sheegaa in ay yihiin kuwa dareenkooda uu ku xidhanyahay marka taabashada jirkooda uu ku bato ayadoona dareenkooda kicitaankiisa lagu sheegay in ay kaalin lixaad leh ka qaadato dareenka tinka iyo taabashada dhow ee hor taala ka hor inta aysan bilaaban ciyaarta xiisa leh ee sariirta.
Tinta ragaasi ku taalo oo ah mid inta badan aysan la dagaalami karin hadana waxaa jirta daawooyin loo soo sameeyay in lagu cirib tiro balse dareenka ragaasi iyo taabashada dhow ayaa ah mid aan laga tagi karin ama aanan la iloobi karin.
Dareenka raggaasi ayaa ah mid haatan ku kooban kaliya in ay arkaan ama ay taabtaan jirka haweeneeda ayadoona xidhiidha laba jinsi uu u yahay raga tinta salka ku leh mid ka balaaran kana mashquul badan kuwa kale ee aan tinta salka ama dabada ku laheyn waana mida keenta in xili walba ay ragaasi si iskooda ah u biya baxaan.